VaTrump Votemesa Vakawanda Musoro neKuramba Kutambira Sarudzo
Mbudzi 16, 2020
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump nemusi weSvondo vanenge vakatenda kekutanga kuti mutungamiri webato remaDemocrats VaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa 3 Mbudzi kunyangwe havo vari kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo.
VaTrump vakanyora mashoko avo pandemutande ravo reTwitter asi hapana kana humbowo hwavari kupa hwekuti sei vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Kunyangwe VaTrump vakaendesa nyaya dzimwe kumatare vachiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, zhinji dzacho dzakaraswa nematare nenyaya yekushaya humbowo.
Vari kutungamira mabasa muhurumende iri kuuya yaVaBiden, VaRon Klan vanoti zviri kutaurwa naVaTrump hazvina nematuro ose uye hazvikanganise vaBiden kutungamira nyika.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Doctor Gadziro Gwekwerere, vanoti zviri kuitika izvi zvinoshaisa nyika yeAmerica chiremera pasi rose uye zvino fanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi.
Hurukuro naDoctor Gadziro Gwekwerere
Kutongwa kweVaimbove Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, Koenderera Mberi
Nyaya yekutongwa kwevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica, VaDonald Trump, yaenderera mberi nhasi mudare reSenate mushure mekunge vadare vahwina vhoti yekuti kutungwa kwaVaTrump kuri pasi pebumbiro yemitemo yenyika kunyange hazvo vakasiya basa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvinafundo Moses Rumano, vanoti pasi rose richange richitarisa zvichabuda munyaya iyi sezvo zvicharatidza kukosha kwekuremekedza bumbiro remitemo nehutongi hwejechetere.
Nhengo nhanhatu dzeRepublican Party dzakavhota pamwe nenhengo makumi mashanu dzeDemocratic Party dzichiti VaTrump vamiswe pamberi pedare vachitongwa nemhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga ku US Capitol Hill.
"Vazhinji vanoda kuti VaTrump vasazowanikwa vachikwikwidza zvakare semutungamiri wenyika munguva inotevera sezvo nyika yange yanyanya nyaya yekudzvanyirira vatema pasi pehutongi hwavo kunyange hazvo vamwe vadare vemubato remaRepublicans vachiri kutsigira VaTrump," vanodaro Doctor Rumano.
Dare reSenate Rotanga Kunzwa Nyaya yaVaDonald Trump
Dare reSenate muAmerica ratanga nhasi kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, yekuti vakatyora bumbiro remitemo nekupesvedzera mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari nhengo ye MDC Alliance, VaDavid Siampondo, vanoti dzimwe nyika dzemuAfrica dzichadzidza zvakawanda panyaya iyi sezvo ichiratidza hutongi hwejechetere hunokwanisa kumisa vaimbove mutungamiri wenyika pamberi pedare kana varesva.
"Zvakakosha kuti kana munhu apara mhosva atongwe zvisina kuti arikubva mumba maani uye kuti ane chigaro chipi. Izvi zvinoreva kuti zvirikuitika mudare reSenate nhasi zvinotaridza kukosha kwakaita kuremekedzwa kwebumbiro remutemo uye hutongo hwejechetere," Va Siampondo vaudza Studio7.
VaSiampondo vanoti zvizhinji pamusoro penyaya iyi zvichanzwikwa mangwana sezvo muzuva ranhasi vadare vemaDemocrats nevadare vemaRepublicans vachatatsurana pamusoro pekuti VaTrump vanokwanisa kutongwa here kana kuti kwete sezvo vasisiri pachigaro.
VaTrump vari kumirirwa nemagweta avo kunyange hazvo vakange vakumbirwa nedare reSenate kuti vange varipo muzuva ranhasi nyaya yavo ichinzwikwa.
Hurukuro naVaDavid Siampondo
Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica VaJoe Biden vakatora mhiko yekutungamira nyika nemusi weChitatu muWashington DC pachiitiko change chakatariswa nevakawanda pasi rose
Asi vasati vatora mhiko, mutevedzeri wavo Amai Kamala Harris vapindawo munhoroondo semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga uye vari mutema vane mumwe mubereki wekuAsia.
Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vanoti kusarudzwa kwaAmai Harris kunopa tariro nechivimbo kumadzimai ose epasi rino anoda kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mushure mekutora mhiko, VaBiden vakabva vatura mashoko kunyika vachikurudzira kubatana.
VaBiden vashora vanhu vakaita mhirizhonga padare guru renyika reCapitol Hill vachitsigiri vaive mutungamiri wenyika aDonald Trump avo vairmba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti izvi hazvifanire kudzokororwa.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane mukurwisa chirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400 000.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaDewa Mavhinga vachishanda nesangano reHuman Rights Wath vati mashoko aVaBiden akakosha zvikuru uye vakari nyaya yerusaruraganda inofanira kumiswa muAmerica.
Asi kekutanga mumakore akawanda, hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo VaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo.
Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba, zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika VaAndrew Johnson kuramba kuenda panotoreswa mhiko vainge vasarudzwa kutungamira nyika VaUlysses S. Grant.
Pazvakaitika zvekare muna 1921 zvakakonzerwa nehurwere hwaVaWoodrow Wilson vakakundikana kuona VaWarren G. Harding vachitoreswa mhiko semutungamiri wenyika.
Kunyangwe VaTrump vasina kuuya pakugadzwa kwaVaBiden, mutevedzeri wavo VaMike Pence vange varipo nedzimwe nhengo dzedare remaRepublicans.
Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti VaGeorge Bush, VaBill Clinton naVaBarack Obama varipo pakugadzwa kwaVaBiden. Vasina kuuya pavaive vatungamiri venyika ndiVaJimmy Carter nekuda kwekurwara.
Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vaVaTrump, muWashington DC makazara mauto, nemapurisa. Muimbi ane mukurumbira Lady Gaga ndiye aimba national anthem uye vamwe vaimba ndiJennifer Lopez na Garth Brooks.
Mangwanani anhasi VaBiden nevakuru vebato ravo remaDemocrats nerinopikisa remaRepublicans vaenda kukereke yeSt Johns Episcopal Church vasati vaenda kuCapitol Hill.
VaTrump nezuro vakatura kunyika mashoko avo ekuoneka asi havana kudoma VaBiden nezita uye havana kutambira kuti ndivo vakakonzera mhirizhinga yakaitwa nevatsigiri paCapitol Hill iyo vari kunzi vakapesvedzera.
VaTrump vakataurawo nezvavanoti vakakwanisa kuita mumakore mana avaitungamira zvinosanganisira kugadzirisa hupfumi hwenyika, kusimbisa miganhu yenyika, kuona kuti nhomba yeCovid-19 yagadzirwa nechimbi chimbi nezvimwe.
VaTrump vasimuka mangwanani anhasi vakananga kuFlorida uko vanenge vave kuenda kunogara. Asi vasati vasimuka, vaonekana nevatsigiri vavo past Andrews Airforce Base muMaryland vakavimbisa kuti vachadzoka.
NeChipiri vachishandisawo masimba avo ehutungamiri wenyika, VaTrump vakaregerera vanhu zana nemakumi mana nevatatu vanosanganisira chipangamazano chavo VaSteve Bannon, vaimbi Lil Wayne naKodak Black asi havana kuzviregerera ivo nemhuri yavo sezvaifungidzirwa nevamwe.
Munhoroondo yeAmerica panyaya dzekuona mafungiro evanhu pahutungamiri kana kuti mapolls, VaTrump ndivo chete mutungamiri asina kukwanisa kusvika pakufarirwa nevanhu vanodarika zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 50%.
Mushure mekutora mhiko, VaBiden vari kutarisirwa kubvisa mimwe mitemo yakadzikwa naVaTrump vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika kusanganisira munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro ekunze uye kudzivirira kupararira kweCovid-19.
Hurongwa Hwekugadzwa KwaVaJoe Bidden Hoenderera Mberi
Sangano rematikitivha muAmerica reFBI rinoti ratanga kuferefeta mauto ose anosvika zviuru makumi maviri nemashanu ari muWashington DC kuzochengetedza vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika VaJoe Biden apo vachatora mhiko nemusi weChitatu sezvo pari kutyirwa kuti vamwe vavo vanogona kuzokanganisa hurongwa uhu.
Asi munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika VaRyan McCarthy vanoti havana humbowo hwavaona hunoratidza kuti pane mauto aya pane angangopanduka. VaMccarthy vanoti vane humbowo hwekuti pane vamwe vasiri kufara nekusarudzwa kwaVaBiden vari kuda kuita zvemhirizhonga.
Mutungamiri wenyika VaDonald Tump avo vakakundwa musarudzo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo uye vanoti havasi kuzoenda kudare reCapitol Hill apo VaBiden vanenge vachitoreswa mhiko.
VaTrump vari kutarisirwa kusimuka muWashington DC vakananga kuflorida nemusi weChitatu mangwanani Vabiden vasati vatora mhiko na 12 masikati muWashinton DC uye 7 manheru kuZimbabwe.
Vamwe vebato remaDemocrats vanyora tsamba kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika kuti vasahengetedze vatrump avo vari kusiya basa zvakanyanya vachisiya vatungamiri vanenge vakaungana muwashington dc pakutoreswa mhiko kwavabiden. Asi kunyangwe zvakadaro, hurongwa hwekugadza vabiden huri kufambira mberi.
NeMuchuro pange pachiitwa hurongwa hwakanangana nekukurudzira mabasa ekuzvipira kushanda mukubatsira vamwe munharaunda pachena kana kuti “United We Serve” National Day of Service” senzira yekucherechedza mabasa akaitwa nemurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Reverend Martin Luther King.
NeMuvhuro rainge riri zororo rekurangarira doctor king uye chikwata chaVaBiden chiri kucherechedzawo hupenyu hwaVaKing. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika VaDavid Siampondo vanoti Doctor Kinga munhu arwira hutongo hwejekerere nekudaro zvakakosha kuti VaBiden vavarangariremuhuronwa hwekugadzwa kwavo.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, Votarisira Kutongwa reDare reSenate
Zvichitevera kubatwa nemhosva kwakaitwa mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, nedare re US House of Representatives, yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga pa Capitol Hill svondo rapera, vanhu vazhinji vakatarisira zvichabuda kudare re Senate uko VaTrump vachatongwa.
Vanhu vazhinji vari kutarisa kuti chiyi chichaitwa nedzimwe nhengo dze Republican Party dzakaita semutungamiri webato iri mu Senate, VaMitch McConnell, avo vaigarotsigira VaTrump asi pari zvino vave kudududza zvisina kunyatsojeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Doctor Gadziro Kwekwerere, vanoti vanoona VaTrump vachizobatwa nemhosva kuSenate sezvo pane nhengo dzebato ravo dzisiri kufara nezvakaitwa naVaTrump.
"Pari zvino pane vamwe vatsigiri vebato remaRepublicans vasina kufara nezvakaitika ku US Capitol zvinosanganisira kurasikirwa kwehupenyu kwevamwe vanhu vakange vari pachiitiko ichi zvingangoita kuti vadare ava vavhote vachitsigira maDemocrats kuti VaTrump vane mhosva," vadaro Doctor Gwekwerere.
Kana VaTrump vakabatwa nemhosva kuSenate vanenge vasisakwanisi kuva nechigaro muhurumende.